Enwere 666 na ogwu corona?
Gini ka Bible na-ekwu?
Echerela onye na-emegide Kraịst. Kama, chere Jizọs ma nwee ntụkwasị obi na Ya site n'okwukwe na Ya!
söndag 07 juni 2020 17:51 📧
Na-emegide Kraịst ika?
Emeela m vidiyo ole na ole na saịtị m blọọgụ ebe m na-akọ banyere ọrịa corona ccovid-19. Na njikọ ndị a, a kọwo nkọlọ na mpaghara nkọwa banyere akara nke àmà na-egosi 666. are na-atụ ụjọ ịnweta akara ahụ site na ịgba ọgwụ mgbochi nke a na-eme nchọpụta na-efe efe gburugburu ụwa.
Ma ndi m hụrụ n'anya, kedụ otu esi agụ Akwụkwọ Nsọ. The Bible kwuru n'ụzọ doro anya na akara nke anụ ọhịa 666 na ulo oru mgbe ma anụ ọhịa ahụ si n'oké osimiri (àmà na-egosi) na anụ ọhịa site n'ụwa (amụma ụgha) pụta. Ọ bụ onye amụma ụgha nke na- ebu akara ahụ, ma ya ma anụ ọhịa ahụ apụtabeghị.
Emebeghị akara a
Emebeghị ihe oyiyi nke onye ahụ na-emegide Kraịst nke onye amụma ụgha ahụ. Ọ bụ ndị niile na-efe ihe oyiyi a na-enweta baajị. Akara ahụ bụ ụdị nnabata, nzere, na ị na-efe anụ ọhịa ahụ ofufe na ị bụ nke ya ugbu a.
Na-emegide Kraịst ebilitebeghị
Ruo ugbu a, onye na-emegide Kraịst ebilitebeghị, ma ọ bụ onye amụma ụgha, emebeghị ikpere arụsị nke onye na-emegide Kraịst ma si otú a emebeghị akara a nke bụ ụdị njirimara. Akara ahụ abịabeghị n'ihi na onye na-emegide Kraịst na onye amụma ụgha ahụbeghị.
Echerela onye na-emegide Kraịst. Kama, chere Jizọs ma nwee ntụkwasị obi na ya site n’okwukwe na ya!
Elu 13 na-akọwa ya nke ọma dịka o kwere omume
1. M wee hụ ka anụ ọhịa si n'oké osimiri na-agbago. O nwere isi asaa na mpi iri, o wee nwee mpi iri na isi ya na aha ekwulu ahụ.
Akpa, anụ ọhịa nke si n'oké osimiri, bụ àmà na-egosi, ga-apụta.
11. Mu onwem hu-kwa-ra anu-ọhia ọzọ ka o n thesi n'ala rigoputa, o nwere mpi abua dika nke aturu, ma o kwuru okwu dika dragon.
Anụ ọhịa ahụ wee si n’ụwa, onye amụma ụgha.
14. O wee duhie ndi bi n’elu uwa site na ihe iriba ama na e nyela ya ikike ime anumanu a, ma na-agwa ndi bi n’elu uwa ka ha meere anụmanụ a ihe ngosi, nke ejiri mma agha merie ma biri.
Ewe nye ya ike inye Mọ ahu ihe oyiyi nke anu-ọhia ahu, ka onyinyo nke anu-ọhia ahu nwe kwa ike ikwu okwu, we me ka ndi nile ndi nākpọ isi ala nye onyinyo nke anu a.
Onye amụma ụgha ahụ mepụtara onyinyo nke anụ ọhịa ahụ a ga-efe ofufe.
16. O we me ka mmadu nile, ndi uku na ndi uku, ndi bara uba na ndi ogbenye, ndi nwere onwe ha na ndi oru, nweta akara n’aka nri ha ma obu n’egedege ihu ha;
17. ya mere na ọ dịghị onye ga - enwe ike ịzụta ma ọ bụ ree, belụsọ onye nwere akara ma ọ bụ aha nke anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ aha nke aha ya.
18. Lee amamihe. Onye nwere nghọta puru iguta onu ogugu nke anumanu a, n’ihi na obu onu ogugu nke nwoke, onu ogugu ya bu 666.
Ndi nile ndi na-efe arusi a nke ndi n’eme ka ndi mmadu akara amaka bu 666.
Gụọnụ / hụ ihe ndị ọzọ
Ugbu a, m na-arịa ọrịa
Enwere m ọrịa nke corona
Etu esi ewute m na oria corona
Ozi sitere n'ụlọ ọgwụ banyere coronavirus
Nkwupụta sitere na ọrịa corona m - Christer Åberg
June 6 na Corona
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 20:11